एलोपेथी वा आयुर्वेदिक, यी दुवै पद्धती कुन-कुन रोगमा बढी असरदायक हुन्छन् ? जानी राखौँ – Etajakhabar
एलोपेथी वा आयुर्वेदिक, यी दुवै पद्धती कुन-कुन रोगमा बढी असरदायक हुन्छन् ? जानी राखौँ
ताजा खबर:- एलोपेथी र आयुर्वेदिक दुवै चिकित्सा पद्धती नेपालमा निकै प्रचलित छ । हुनत: प्रायजसो यो सवाल उठ्छ कि यी दुवै पेथीमा कुन बढी असरदायक छ वा कुन रोगको लागि कुन बढी फाइदाजनक छ? चिकित्सकका अनुसार, दुवै पेथीको आ-आफ्नो महत्व छन् । आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धती जहाँ रोगबाट बचाउन र यसको जरा देखि नै नष्ट गर्नमा असरदायक हुन्छ भने एलोपेथी तीव्र र गम्भीर रोगहरू, जटिल अप्रेशन्स र इन्फेक्शनको उपचारमा राम्रो हुन्छ । दुवै पेथीको केही न केही साइड इफेक्ट्स पनि हुन्छ । आज हामी चर्चा गर्दैछौँ, कुन रोगहरूको लागि यी दुवैमा कुन पेथी राम्रो छ र कसको के नोक्सान छ?
एलोपेथीको उपयुक्त प्रयोग एक्यूट कंडीशन, जहाँ तुरुन्त उपचारको आवश्यक हुन्छ । हर्ट अट्याक, गम्भीर इन्फेक्शन, सर्जरी, एंजियोप्लास्टी आदि । एलोपेथीको फाइदा तुरुन्त आराम, सर्जिकल अप्रेशनको लागि बढी राम्रो सुविधा, इन्जेक्शन र एन्टीबायोटिक्सको ठूलो रेन्ज । एलोपेथीको नोक्सान सिन्थेटिक औषधी, एलर्जी, साइड इफेक्ट, कयौँ रोगहरूको परमानेन्ट हल हुँदैन, कयौं रोगहरूको अप्रेशनको बिना उपचार हुँदैन ।
आयुर्वेदिकको उपयुक्त प्रयोग इम्युनिटी बढाउन र रोगहरूबाट बचाउनको लागि, रोगहरूलाई जरै देखि नष्ट गर्नको लागि, उपचारको पश्चात् पुन स्वास्थ्यलाभका लागि । आयुर्वेदिकको फाइदा साइड इफेक्ट कम हुन्छ, अधिकांश औषधी नेचुरल मटेरियल्सबाट बन्छ, रिएक्शन कम हुन्छ, घरेलू उपाय समावेश हुन्छ । आयुर्वेदिकको नोक्सान औषधीको लामो कोर्स, महँगो जडिबुटी र रसायनहरूको औषधीको प्रयोग, अप्रेशन र जाँचको आधुनिक सुविधा हुँदैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक ०८, २०७४ समय: १४:३५:०१